I-Gite La Marine enendawo yokubhukuda nethala - I-Airbnb
I-Gite La Marine enendawo yokubhukuda nethala
Aubussargues, Occitanie, i-France
Kutholakala emizuzwini engaphansi kwengu-10 ukusuka e-Uzes, kule ndlwana eyakhiwe ngamatshe, ehlotshiswe kahle, uzohlala endaweni ethulile futhi emnandi.
Ilungele ukuhlala kwabantu ababili, uzojabulela ithala langasese elinendawo yokosa inyama, ukufinyelela endaweni yokubhukuda enamanzi ashisayo ehlanganyelwa nabanikazi kanye nendawo yokupaka emboziwe yangasese. Indlwana ikunikeza ikamelo elilodwa, indlu yokugezela eyi-1 eneshawa nobhavu, ikamelo elikhulu lokuphumula elinendawo yokubasa umlilo, ikhishi elinakho konke nendawo enikezelwe ekusebenzeni ukude.
Indawo yokuhlala elungiswe ngokuphelele, wonke amasevisi abuyekeziwe. Uzoba negumbi lokulala elinezinto zokulala ezingu-140 ezinhle kakhulu, i-closet ne-TV, ikamelo lokuphumula elinosofa, indawo yokubasa umlilo ne-TV, indlu yokugezela ephelele eneshawa, ubhavu nendlu yangasese, ikhishi elivulekile elinesiqhingi esiyinhloko esinakho konke okudingekayo (umshini wokugeza izitsha, ifriji, uhhavini one-pin eguquguqukayo, izitsha zokupheka...).
I-WIFI YAMAHHALA, uxhumano lwe-inthanethi lwejubane eliphakeme kakhulu olune-satellite TV.
Ideski elilodwa ekamelweni lokulala kanti elinye egumbini lokuphumula livumela ukusebenza ukude.
Amashidi namathawula anikeziwe
Indawo ezungeze idolobha elikhulu inokuthula okukhulu. Ukuhambahamba okuseduze nemizila yokuqwala izintaba, phakathi kwemivini nezihlahla zomnqumo.
Ngomoya "wengane enhle", ifasitela elincane elitholakala ngemizuzu embalwa yokuhamba lingakwamukela ngenkathi yonyaka njalo ngoLwesibili ebusuku. Ungakwazi ngisho noma inhliziyo ikutshela ukuthi ushaye ingoma.
Sihlala endlini ephambi kwendlwana ehlukaniswe nendawo yokubhukuda. Sizokukwamukela lapho ufika futhi sikuvumele ujabulele ukuhlala kwakho ngokuzimela okuphelele.
Uma ungathanda, umbungazi wakho u-Catherine angakwethula emisebenzini yakhe yobuciko kanye nokushwibeka eqhweni.
Sizokwazi ukuphendula zonke izicelo zakho futhi sibonise wonke amasayithi amaningi esiwavakashelayo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Aubussargues namaphethelo